Ụgbọ elu Emirates ịnakwere ịkwụ ụgwọ na BTC - CoinWorldMap
Ụgbọ elu Emirates ịnakwere ịkwụ ụgwọ na BTC
Mee 14, 2022 Bitcoin, Dogecoin, Nft
Ụgbọ elu ahụ na-amalite iji teknụzụ blockchain iji soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe ma gbasaa iru ya. Emirates na-ewe ndị ọrụ ọhụrụ iji jikwaa ọrụ Metaverse na NFT.
Emirates, ụgbọ elu kacha ibu na United Arab Emirates, ekwuputala ebumnuche ya ịgbakwunye Bitcoin dị ka usoro ịkwụ ụgwọ na ịme mkpokọta. Nft dị maka ịzụ ahịa na webụsaịtị ụlọ ọrụ.
Emirates COO Adel Ahmed Al Redha kwuru na ogbako ogbako na Arabian Travel Market, ụgbọ elu nke Dubai na-atụkwa anya iji teknụzụ blockchain soro ndekọ ụgbọ elu.
O kwughị mgbe njirimara ọhụrụ ahụ ga-adị, ma o kwuputara atụmatụ iji nweta ndị ọrụ ọhụrụ ga-elekwasị anya na mmejuputa na njikwa nke ịkwụ ụgwọ crypto, nkwụsị nke blockchain, metaverse na NFT oru.
Ọ gbakwụnyere na atụmatụ ndị a metụtara blockchain bụ akụkụ nke atụmatụ ndị na-ebu ibu iji meziwanye "nleba anya mkpa ndị ahịa" ma mee ka ọrụ, ọzụzụ na ire ere na webụsaịtị dịkwuo usoro "mmekọrịta".
Emirates buru ụzọ kpughee n'April atụmatụ ya imefu "iri puku kwuru iri nde dollar" na atụmatụ iji gbasaa ọrụ ya na metaverse wee mepụta NFT mkpokọta na uru, nke a na-atụ anya ịmalite n'ọnwa ndị na-abịa.
Ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dabeere na Dubai na-anabata blockchain na cryptocurrencies, Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ewepụtala ọrụ gọọmentị ya na metaverse. Onye na-ahụ maka crypto nwetara ala na nso nso a na metaverse nke The Sandbox nwere atụmatụ maka isi ụlọ ọrụ mebere, ma ọ bụ MetaHQ.
Ọtụtụ ụgbọ elu ndị ọzọ anabatala cryptocurrency dị ka ịkwụ ụgwọ. Ụgbọ elu Latvia AirBaltic bụ onye mbụ n'ụwa nabatara ịkwụ ụgwọ bitcoin maka ụgbọ elu ya laa azụ na 2014. Ugbu a ọ na-enweta mgbasa ozi na dogecoin.
N'October 2021, Onye isi ala Salvadoran Nayib Bukele kwupụtara na ụgbọ elu dị ọnụ ala nke Central America Volaris ga-anabata bitcoin, mana emebebeghị atụmatụ a.
Onye isi FTX na-ahụ ohere na ahịa nsogbu
EU na-ekwusi ike na ịmachi ọrụ nke ụlọ ọrụ crypto